Nalalka magaalada waxay ku darsadaan mowduuca caadiga ah ee skateboardka waxyaabaha ku jira xilliga iftiinka habeenkii. Dareenka dhaqdhaqaaqa, faahfaahinta ficil ahaaneed ee wax ku oolka ah iyo faahfaahin qaabeysan ayaa hal-abuureysa walxaha skateboard-ka muhiimka ah. Waxay u dhigmi kartaa midabada dhalaalaya ee cagaarka lime bayoolaji, midab elektaroonig ah iyo buluug caqli badan oo leh midab keliya si loo soo bandhigo dareen ka duwan.
1. Qalabka wax-qabad ee dib-u-celinta badan ee wax-qabadka leh ayaa la qabsan kara xaaladaha cimilada ee la beddeli karo xilliga guga. Dabeylaha dabaysha leh siibtarrada dhalaalaya wuxuu adeegsadaa jeebado qaabaysan, shaqooyin laba dhinac leh oo xiranaya iyo muujiyeyaasha laydhka iftiimiya si loo muujiyo waxyaabo wax ku ool ah.
2. Dharka jilicsan ee maqaarku taabto sida nylon ayaa loo isticmaalaa in lagu sameeyo gaagaaban skateboard. Dhexgalka milicsiga ama faahfaahinta xariiqda ayaa lagu daraa qaabka dabacsan si loo soo bandhigo saameynta iftiinka casriga ah, taas oo muujineysa dareenka wax ku oolka ah adoo adeegsanaya suumanka la isku hagaajin karo ee dhexda.
3. Midabka iftiinka maskaxdu wuxuu ku darayaa saamayn dhalaalaya midabka asalka ah ee madow ama muraayadaha indhaha, silsiladaha marmarka ayaa cusbooneysiinaya saamaynta daabacaadda ee midabbada leh, taas oo naqshad caan ah guga iyo xagaaga 2021.
4. Iyadoo lagu raad joogo raaxada ugu badan, qaabka Tannin wuxuu u weecday naqshad ballaadhan oo dabacsan laga soo bilaabo 1990-yadii, naqshadda xagjirka ah ayaa loo xushay inay meel u dhigto koritaanka iyo dhererka carruurta. Midabada dhalaalaya sida bio lime cagaaran iyo elektarooniga elektaroonigga ah sidoo kale waxaa lagu waafajin karaa midab madow iyo caddaan ah, kaas oo ku daraya midab aan caadi ahayn oo dhalaalaya naqshadeynta.
5. Qaybta 'asymmetric cut & sewn panel' ayaa beddeleysa midda isboortiga, faahfaahinta midabka firfircoon ayaa xukuma xilliyadii la soo dhaafay, laakiin qaabka asymmetric cut & sewn ka casrisan ee casriga ah ayaa caan ku ah xilligan. Diirada suuqa ee goynta aasaasiga ah iyo tolida ayaa ah in la isticmaalo midabbada iyo qaabab daabacan si loo abuuro dareen ka duwan.
6. Qurxinta caanka ah waxay xoojineysaa dharka isboortiga. Isku darka midabka dhalaalaya iyo faahfaahinta dharka isboortiga caanka ah ayaa ka dhigaya faahfaahinta la arki karo inay noqdaan isbeddel cusub. Faahfaahinta isboorti ee caanka ah sida geesaha, dhejiska xargaha xargaha iyo xargaha ayaa caan ku ah taxanaha dharka isboortiga.
Waqtiga boostada: Meey-06-2020